Rabshaduhu way saameyn karaan horyaalka - BBC News Somali
Rabshaduhu way saameyn karaan horyaalka
10 Agoosto 2011
Image caption Rabshaduhu way saameeyeen ciyaaraha horyaalka Britain
Maamulka ciyaaraha horyaalka kubbadda cagta Ingiriiska ayaa maalinta Khamiista ah go'aan ka gaaraya haddii ay qabsoomi karaan ciyaaraha loogu talagalay in lagu furo tartanka horyaalka dhammaadka toodobaadkan ama in dib loo dhigo kaddib habeen kale oo rabshado dhaceen.
Rabshaduhu waxay dalka ka dhacayeen tan iyo maalintii Sabtidii, taas oo ciriiri gelisay adeegga police-ka.
Hadal wada jir uga soo baxay maamulka tartanka horyaalka iyo xiriirka kubbadda cagta waxaa lagu sheegay inay wada hadal kula jiraan naadiyada kubbadda cagta ee London, police-ka iyo mas'uuliyiin kale.
hadal kale ayay soo saari doonaan kaddib marka xaaladda dib loo eego maalinta Khamiista.
Waxaa jira saddex ciyaarood oo ku qoran inay London ka dhacaan Sabtida, kuwaas oo dhammaantood ay tahay inay bilawdaan saacaddu markay tahay 1500 ama saddexda galabnimo. waxayna kala yihiin: Tottenham vs Everton, Fulham vs Aston Villa iyo QPR vs Bolton.
Hadalkan oo shalay soo baxay waxaa lagu yiri 'Ciyaaraha ku qoran meel ka baxsan London rabshaduhu ma saameynayaan' laakiin waxay ahayd kahor intii aanay rabshaduhu ku fidin gobollada West Midlands iyo Manchester, meelahaas oo ay ku qoran yihiin ciyaaro maalinta Axadda dhexmaraya kooxaha West Bromwich oo marti gelinaysa Manchester United, kahor inta Manchester City aysan garoonkeeda kula ciyaarin kooxda Swansea maalinta Isniinta ah.
Guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta, Greg Clarke, waxaa uu sheegay in haddii ay police-ku u arkaan inay jiraan arrimo ka muhiimsan in garoomada ciyaaraha ciidan loo soo diro ay markaasi ku taageerayaan go'aankooda. waxaana uu intaas raaciyay inay police-ka daqiiqad-daqiiqad isula eegi doonaan hadba xaaladdu halka ay marayso.
Waxaan dhegaystayaasha BBC-da la socod siinaynaa in toddobaad walba maalinta Sabtida ah aan toos ugu soo tebin doono mid ka mid ah ciyaaraha horyaalka kubbadda cagta Ingiriiska, idinkoo weliba kulammada kale ee maalintaas dhacaya natiijadooda toos ula socon doona inta ciyaartaasi socoto.